Dɛn na Bible Ka Wɔ Awaregyae ne Ntetewmu Ho? | Onyankopɔn Dɔ
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Altai American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Douala Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Iloko Indonesian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mixe (North Central) Mizo Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Rarotongan Romanian Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vezo Wallisian Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Nea Bible Ka Wɔ Awaregyae ne Ntetewmu Ho
Yehowa hwɛ kwan sɛ wɔn a wɔaware no bedi wɔn ho nokware sɛnea aware ntam a wɔkae no kyerɛ. Bere a Yehowa reka ɔbarima ne ɔbea a wodi kan no abom sɛ awarefo no, ɔkae sɛ: ‘Ɔbarima de ne ho bɛkɔ akɔfam ne yere ho na wɔayɛ ɔhonam koro.’ Akyiri yi Yesu Kristo tĩĩ asɛm yi mu na ɔsan de kaa ho sɛ: “Enti nea Onyankopɔn aka abom no, mma onipa biara nntetew mu.” (Genesis 2:24; Mateo 19:3-6) Enti Yehowa ne Yesu bu aware sɛ ade a ɛsɛ sɛ ɛtena hɔ daa kosi sɛ baako bewu. (1 Korintofo 7:39) Esiane sɛ aware yɛ kronkron nti, ɛsɛ sɛ yebu awaregu aniberesɛm. Nokwarem no, Yehowa kyi awaregu a ennyina Kyerɛwnsɛm so.—Malaki 2:15, 16.
Dɛn na Kyerɛwnsɛm ka sɛ obi betumi agyina so agyae aware? Yehowa kyi awaresɛe ne aguamammɔ anaa nna mu ɔbrasɛe. (Genesis 39:9; 2 Samuel 11:26, 27; Dwom 51:4) Nokwarem no, Yehowa bu aguamammɔ sɛ akyide araa ma ɛno ne ade a ɔma kwan sɛ obi betumi agyina so agyae aware. (Sɛ wopɛ sɛ wuhu nea aguamammɔ kyerɛ a, hwɛ nhoma yi Ti 9, nkyekyɛm 7; wɔakyerɛkyerɛ aguamammɔ mu wɔ hɔ.) Sɛ obi sɛe aware a, Yehowa ma kwan sɛ ne hokafo betumi akɔ so aware no anaasɛ obegyae no. (Mateo 19:9) Enti sɛ ɔhokafo a ne ho nni asɛm no ka sɛ obegyae aware a, ɔntoo Yehowa mmara. Nanso Kristofo asafo no deɛ, ɛrenhyɛ obiara nkuran sɛ onnyae aware. Nokwarem no, tebea horow bi bɛma ɔhokafo a ne ho nni asɛm no akɔ so aware nea wayɛ bɔne no, titiriw sɛ wanu ne ho ampa a. Nanso ne nyinaa mu no, wɔn a Kyerɛwnsɛm ma wɔn kwan sɛ wotumi gyae aware no ankasa na ɛsɛ sɛ wosi ho gyinae, na nea ebefi mu aba biara no, ɛsɛ sɛ wɔpene so.—Galatifo 6:5.
Ɛtɔ da bi a, nsɛm a emu yɛ den bi betumi asɔre ma Kristoni bi asi gyinae sɛ ɔne ne hokafo bɛtetew mu anaasɛ obegyae no, bere mpo a ɔmmɔɔ aguaman. Tebea a ɛte saa mu no, Bible no kyerɛ sɛ nea ɔpɛ sɛ ɔtetew aware no mu no ‘nnware, anyɛ saa a ɛsɛ sɛ wɔkɔbom bio.’ (1 Korintofo 7:11) Kristoni a ɔte saa nni hokwan sɛ ɔne obi foforo yɛ aware nhyehyɛe. (Mateo 5:32) Momma yɛnhwɛ nsɛm a emu yɛ den a ebinom agyina so atetew aware mu no bi.
Bere a obi hyɛ da sɛ ɔrenhwɛ n’abusua. Abusua bi betumi adi hia buruburoo ma asetenam nneɛma a wohia abɔ wɔn, efisɛ okunu no ahyɛ da sɛ ɔrenhwɛ abusua no, ɛwom sɛ obetumi ayɛ saa deɛ. Bible no ka sɛ: “Sɛ obi nhwɛ n’ankasa . . . ne fiefo a, wapa gyidi no, na ɔyɛ onipa bɔne sen nea onnye nni mpo.” (1 Timoteo 5:8) Sɛ ɔbarima a ɔte saa ansesa n’akwan a, ebia ɔyere no besi gyinae sɛ ɔne ne mmofra no yiyedi nti, ɔbɛtetew aware no mu wɔ mmara kwan so. Nokwarem no, sɛ ɔyere bi kɔbɔ ne kunu sobo kyerɛ Kristofo mpanyimfo no sɛ ɔnhwɛ n’abusua a, ɛsɛ sɛ mpanyimfo no susuw ho yiye. Sɛ obi hyɛ da po sɛ ɔbɛhwɛ n’abusua a, wobetumi atu no afi asafo no mu.
Bere a obi yɛ ne hokafo ayayade. Obi betumi ayɛ ne hokafo ayayade ma ebia ɛde n’akwahosan anaa ne nkwa mpo ato asiane mu. Sɛ nea ɔreyɛ ne hokafo ayayade saa no yɛ Kristoni a, ɛsɛ sɛ asafo mu mpanyimfo hwehwɛ asɛm no mu. Wobetumi atu obi a ɔwɔ bobɔne anaa ɔboro ne hokafo afi asafo no mu.—Galatifo 5:19-21.
Bere a obi som da asiane mu. Obi hokafo betumi afa ɔkwan biara so ma ayɛ den ama no sɛ ɔbɛsom Onyankopɔn anaasɛ ɔbɛhyɛ no sɛ ɔnto Onyankopɔn mmara mpo wɔ ɔkwan bi so. Sɛ ɛba saa a, ebia nea ne hokafo resiw ne som kwan no besi gyinae sɛ, sɛ ntetewmu na ɛbɛma ‘watie Onyankopɔn sɛ sodifo mmom asen nnipa’ a, ɛnde ɔbɛtetew mu.—Asomafo Nnwuma 5:29.
Sɛ nsɛm a emu yɛ den a yɛasusuw ho yi mu biara sɔre a, ɛnsɛ sɛ obiara hyɛ nea ne ho nni asɛm no sɛ ɔntetew mu anaa ɔnkɔ so ne ne hokafo no ntena. Kristofo a wɔn ho akokwaw ne mpanyimfo betumi de Bible mu afotu aboa no, nanso wɔrentumi nhu nea ɛrekɔ so wɔ okunu ne ɔyere no ntam nyinaa. Yehowa nkutoo na obetumi ahu. Nokwarem no, sɛ Kristoni a ɔyɛ ɔyere gugu n’aware nsɛm mu dodo sɛnea obenya kwan afi ne kunu nkyɛn a, eyi renkyerɛ nidi mma Onyankopɔn anaa aware nhyehyɛe no; saa ara nso na ɛte wɔ okunu no fam. Sɛ obi twa nkontompo de hwehwɛ ntetewmu, na ɔbɔ mmɔden sɛ ɔde emu nokwasɛm besie a, Yehowa nim. Nokwarem no, “nneɛma nyinaa ho da hɔ, na ɛso abue pefee, nea yɛne no wɔ akontaabu no anim.” (Hebrifo 4:13) Nanso sɛ tebea no yɛ aniberesɛm na ɛtena hɔ kyɛ na sɛ Kristoni bi te nka sɛ nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ ara ne sɛ ɔtetew mu a, ɛnsɛ sɛ obiara kasa tia no. Ne nyinaa mu no, “yɛn nyinaa begyina Onyankopɔn atemmu agua no anim.”—Romafo 14:10-12.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan “Momfa Mo Ho Nsie Onyankopɔn Dɔ Mu”
Wobɛyɛ Dɛn Aboa Kristofo a Wɔn Aware Agu?
Mma Awaregyae Mmmɔ Wo Asesa